आम्दानी घटेसँगै घट्यो लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको नाफा, प्रतिशेयर आम्दानी कति ? | आर्थिक अभियान
आम्दानी घटेसँगै घट्यो लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको नाफा, प्रतिशेयर आम्दानी कति ?
वैशाख ३०, काठमाडौं । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले चालू आवको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण शुक्रवार सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको खुद नाफा गत आवको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा ३० प्रतिशत घटेको छ । कम्पनीले गत आवमा रू. १३ करोड ७७ लाख नाफा कमाएकोमा चालू आवमा रू. ९ करोड ५५ लाखमा झरेको हो ।
चालू आवमा कम्पनीको आम्दानी घटेसँगै नाफा घट्न पुगेको हो । गत आवको तुलनामा चालू आवमा कम्पनीको आम्दानी १६ प्रतिशत घटेको छ । गत आवमा कम्पनीले रू. २३ करोड ६ लाख आम्दानी गरेकोमा चालू आवमा रू. १९ करोड ३४ लाखमा झरेको हो ।
कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब १९ करोड रहेको छ भने जगेडामा रू. ३१ करोड १७ लाख सञ्चित गरेको छ । चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीको बीमा कोषमा रू. ७७ करोड १७ लाख जम्मा भएको हो ।
सो अवधिमा कम्पनीले कुल रू. १ अर्ब १५ करोड बीमाशुल्क आर्जन गरेको हो ।यो बीमाशुल्क गत आवको तुलनमा १३ प्रतिशत वृद्धि भएको हो । सो अवधिमा कम्पनीले रू. १ अर्ब १ करोड कूल बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । चालू आवमा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. १० दशमलव ६२, मूल्य आम्दानी अनुपात ६५ दशमलव ७० गुणा र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १९३ दशमलव २८ रहेको छ ।